चीन लकड़ी रंग स्यान्डस्टोन स्प्लिस्टफेस स्टोन प्यानल कारखाना र निर्माता DFL
प्रकार:बालुवा ढु stones्गा
रंग:काठको नसहरू रंगीन
आकार: ×० × १ cm सेमी।
उपयोग: सुविधा भित्ता
सामग्री: बलौटे ढु .्गा
प्याकिंग: 7pcs / box, 48boxs / crate
ग्राहकहरूको सन्दर्भको लागि RFQ
१, हामीले स्वीकार गर्न सक्ने भुक्तानी सर्तहरू के हो?
२, हामीसँग कति रंग छन्?
,, कुन देशहरू त्यस्ता ढु stones्गाहरूको लागि सब भन्दा लोकप्रिय छ?
कुनै पनि अन्य प्रश्नहरू यदि तपाइँसँग छन् भने, कृपया। हामीलाई सिधा ई-मेल पठाउनुहोस्।
काठको रंग स्यान्डस्टोन विभाजन स्टोनप्यानलसँग बनावट र रंगको समृद्धि छ जुन कुनै पनि भित्री वा बाह्य बस्ने ठाउँमा कालर लालित्यको भावना थप गर्दछ। स्थायित्व र बहुमुखी प्रतिभाको ग्यारेन्टी, प्राकृतिक पत्थर उत्पादनहरू स्थायी शैलीको एकीकृत लुक बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। DFLstoneढुone्गा प्यानल निम्न सुविधाहरूको पालना गर्नुहोस्:
आदर्श काठ विभाजन स्टोन प्यानल निर्माता र आपूर्तिकर्ता खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईंसँग सिर्जनशील हुन मद्दतको लागि हामीसँग ठूलो मूल्यहरूमा विस्तृत चयन छ। सबै काठको रंग विभाजन स्टोन गुणवत्ता ग्यारेन्टी छन्। हामी काठ स्टोन पैनलिelको चीन मूल फ्याक्ट्री हो। यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
लोकप्रिय प्राकृतिक गोल्ड लाइन क्वारजाइट स्टोन वाल पी ...
पहेंलो पालिशिंग प्राकृतिक ढु Pe्गाको ढु Mos्गा मोज़ाइक
बाहिरी व्यक्तिहरूको लागि कम मूल्य वास्तविक ढु panel्गा प्यानेल गर्ने प्रणाली